D/Hoose Hargeysa oo Shirkadda Dhis Ka wareejisay khashin ururintii Gacan-libaax iyo 26 June | FooreNews
Home wararka D/Hoose Hargeysa oo Shirkadda Dhis Ka wareejisay khashin ururintii Gacan-libaax iyo 26 June
D/Hoose Hargeysa oo Shirkadda Dhis Ka wareejisay khashin ururintii Gacan-libaax iyo 26 June
fooreApr 05, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Dawladda Hoose ee Caasimadda Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah uga wareejiyay shirkadda maxaliga ah ee DHIS masuuliyada hawsha qashin ururinta laba degmo oo ka mid ah sadex degmo oo ku yaala caasimadda Hargeysa oo qandaraas hore loogu siiyay inay ka shaqayso fayo-dhawrka degmooyinka 26 June, Ibraahim Koodbuur iyo Gacan-libaax.
Dawladda Hoose waxay shirkadda Dhis u xil saartay oo qudha khashin ururinta degmadda 26- June, halka ay laba shirkadood oo cusub oo kala ah Taabsan iyo Keeps ay u kala xil saaray khashin ururinta degmooyinka Gacan-libaax iyo Ibraahim-Koodbuur. Waxaanay talaabadan u qaaday markii shirkadda Dhis ay dabooli kari wayday fayo-dhawrka iyo khashinka sadexdaasi degmo.
Xaflad shirkadahaasi loogu kala wareejinayay hawsha ay wada haysay shirkadda Dhis oo maanta lagu qabtay xarunta dawladda Hoose ee Hargeysa waxa ka soo qeyb galay Xoghayaha Fulinta dawladda Hoose Hargeysa Mawliid Waris Cabdilaahi, Agaasimeyaasha waaxaha arrimaha bulshadda iyo Gaadiidka iyo Guddoomiyeyaasha sadexdaasi shirkadoood.
Agaasimaha waaxda Arrimaha bulshadda iyo caafimaadka Dawladda Hoose Khadar Yuusuf Cali oo ugu horayn ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay in dawladda Hoose ay go’aansatay si loo dar-dar geliyo caafimaadka iyo bilicda caasimadda Hargeysa in hawshii shirkadda DHIS ay wada haysay qeyb la siiyo laba shirkadood oo kale.
Agaasimuhu wuxuu tilmaamay in shirkadda Dhis ay ku baahday oo ay tahli wayday inay sidii la rabay uga soo dhalaasho khashin ururinta sadexda degmo ee Gacan-libaax, 26ka June iyo Ibraahim Koodbuur, sidaasi darteedna lagu wareejiyay khashin ururintii degmada Gacan-libaax Shirkadda Taabsan, halka degmadda Ibraahim Koodbuurna lagu siiyay qandaraas shirkadda Keeps.
Khadar Yuusuf Cali wuxuu shirkadaha khashin ururinta ugu baaqay inay si weyn isu xil-saaraan oo ay xakameeyaan khashinka magaaladda, waxaanu u soo jeediyay inay inta aan la gaadhin xili roobaadka ay nadiifiyaan degmooyinka qandaraaska lagu siiyay.
Guddoomiyaha Shirkadda DHIS Mahdi Cismaan Buuri oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin masuuliyadda culus ee laga dul qaaday, waxaanu si weyn ugu mahad celiyay dawladda Hoose oo uu tilmaamay inay si weyn ula soo shaqeysay kana caawisay dhinaca Gaadiidka khashinka.
Mahdi Cismaan Buuri waxa kale oo uu Dawladda Hoose ku ammaanay inay kab lacageed siin jirtay si ay daboolaan adeega xasaasiga ah ee ay dawladda Hoose qandaraaska ku siisay.
Guddoomiyaha Shirkadda Dhis waxa uu balan qaaday inay ku dedaali doonaan inay ka soo baxaan masuuliyadda degmadda loo xil saaray inay ka ururiyaan khashinka.
Xoghayaha Dawladda Hoose ee Hargeysa Mawliid Waris Cabdilaahi oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in Golaha deegaanku go’aamiyay in labada degmo ee gacan-libaax iyo Ibraahim Kood-buur la siiyo labada shirkadood ee Taabsan iyo Keeps oo uu xusay inay ku guulaysteen tartan loo galay qandaraaska fayo-dhawrka degmooyinkaasi.
Xoghayuhu wuxuu ku dooday inay labadan shirkadood ay ku doorteen qalabkooda iyo kartida ay u leeyihiin inay daboolaan hawsha loo xil saaray.
Mawliid Waris waxa kale oo uu u mahad celiyay shirkada Dhis ee ay ka qaadeen laba ka mid ah sadexdii degmo ee hore qandaraaska loogu siiyay waxaanu carabka ku dhuftay inay wixii tamartooda ah qabteen.
“Arrinta khashinku waxay ahayd culaysyadda jiray ee dhinaca bilicda ka haystay dawladda Hoose, waxaana labadan shirkadood ay ku soo baxeen tartan loo galay waxaanan ku qaadanay markii aanu qiimaynay qalabkooda iyo awoodooda,”ayuu yidhi Mawliid Waris.
Xoghayuhu wuxuu intaasi ku daray inay dawladda Hoose ay sii wadayso taageeradda ay siiso shirkadaha khashinka.
Mawliid Waris wuxuu ku dardaaray dhammaan shirkadaha ka hawl-gala khashinku inay ka soo baxaan masuuliyadooda iyo adeega ay dawladda Hoose qandaraaska ku siisay.
Xoghayuhu wuxuu sheegay inay shirkadda Dhis ay labadan shirkadood ee cusub ku wareejinayso wixii agab iyo gaadiid ah ee loogu tallo galay in loogu adeego degmooyinka Ibraahim Koodbuur iyo Gacan[-libaax.
Mawliid Waris waxa kale oo uu si qoto dheer uga waramay hawl-galkii ay dawladda Hoose ku banaysay jidadka faras-magaalaha Hargeysa, waxaanu tilmaamay inay qeyb ka tahay qorshe balaadhan oo kor loogu qaadayo bilicda caasimadda,
Waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay Yuusuf Xuseen Iyo Cumar Sh. Cabdilaahi oo ka kala socday shirkadah Taabsan iyo Keeps waxaanay balan qaadeen inay dedaal weyn u geli doonaan sidii ay ula tacaali lahaayeen khashinka labada degmo ee qandaraaska lagu siiyay waxaanay dawladda Hoose uga mahad celiyeen siday shirkadaha wadaniga ah uga qeyb gelinayso fulinta adeegyadda bulshadda.
Previous PostWasiirro ka hadlay Booqasho ay ku tageen Degmooyinka Gobolka Gabiley Next PostQarax Khasaare weyn geystay oo ka dhacay Muqdisho iyo Raysal wasaaraha oo ka badbaaday